Showing ८१-९० of १४९ items.
समाजको जटिल रोग ठगी धन्दा
पछिल्लो समय शहरमा ठगी धन्दा बढेको देखिन्छ । धरानमा सहकारी र सुनपसल खोलेर करोडौं ठगी गरेको घटनाको अनुसन्धान जारी छ । पूर्वका विराटनगर, झापालगायतका ठाउँमा पनि विभिन्न प्रकारका ठगी धन्दा दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । सुनसरीको इटहरीमा केही समययता चेक बाउन्सबाट ठगी हुने गरेका घटना बढिरहेको प्रकाशमा आएको छ । यसरी लगातार ठगी घटना हेर्दा यो एउटा जटिल सामाजिक रोगका रूपमा विकास भइरहेको छ ।‘अरूले हात्ती चढे भन्दैमा आफू धुरी नचढ्नु’ भन्ने नेपाली उखानै छ । अर्को नेपाली उखान छ, ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ दुवै उखानले आफ्नो जीवनशैली आफ्नो हैसियत अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दि
प्रकाशित मितिः भदौ ४, २०७६
३२७ पटक पढिएको
कोशी पीडितलाई न्याय कहिले ?
२५ अप्रिल १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता ६५ वर्ष पुगेको छ । भारतले आफ्ना विहारका नागरिक बाढीबाट सुरक्षित बनाउन सनुसरी र सप्तरीको बीचमा सप्तकोशी नदीमा ५६ ढोकाको व्यारेज बनायो । उक्त व्यारेज बनाउँदा नदीको आसपासमा बसेका हजाराँै मानिस विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर सम्झौता त ग¥यो तर ६५ वर्षदेखि सम्झैेता कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो । पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौं बिगाहा जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारले दिने भन्ने कोशी सम्झौता भएको थियो । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौताअनुसार बूँदा नम्बर ३,८ र ९ तथा १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बु
प्रकाशित मितिः भदौ २, २०७६
अस्पतालको फट्याइँमा प्रशासन मूकदर्शक
फोहोर विसर्जन ठीक ठाउँमा नगर्ने नेपालको पुरानै रोग हो । स्थानीय तहमा फोहोर विसर्जनको समस्या व्यापक छ । त्यसमा अस्पतालहरू पनि पर्ने नै भए । अझ अस्पतालमा त विभिन्न प्रकारका फोहोरहरू निस्काशन हुन्छन् । जसलाई ठीक ठाउँमा विसर्जन गरिएन भने त्यसले रोगको ठूलै प्रकोप निम्त्याउँछ । दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमाथि स्थानीयको यस्तै आरोप छ । अस्पताले परिसरभित्रै फोहोर जलाउँदा भाइरल ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या निम्तिएको स्थानीयको जुन दाबी छ, त्यो केही हदसम्म अध्ययन, अनुसन्धानले पुष्टि पनि गरेको छ । अस्पतालजन्य फोहोरको विसर्जनमा लाइफलाइन अस्पताल प्रशासनले जुन उत्तर स्थानीयलाई दिएको छ, त्यो न्यायसङ्गत छैन । जल
प्रकाशित मितिः श्रावण ३१, २०७६
१६४ पटक पढिएको
रानी–किमाथाङ्का सडक आयोजना ढिलाई किन ?
भारतीय सिमानामा पर्ने विराटनगरको रानीदेखि चीनको सिमानामा पर्ने किमाथाङ्कासम्मको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना प्रदेश १ को गौरवको आयोजना हो । रानीदेखि धरानसम्म ६ लेन र बाँकी २ लेनको हुने गरी सरकारले २०६९ सालदेखि आयोजना शुरु गरेको भए पनि आयोजनाको समयावधि सकिन लाग्दासमेत ५० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । हुन त एडिबिको ऋण सहयोगमा देशभरि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु कतिपय असफल भएका छन् भने कतिपय कछुवाको गतिमा सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा प्रदेशको सम्वृद्धिको ढोका खुल्ने गौरवको आयोजनाको काम सन्तोषजनक नहुनुले प्रदेशको भविष्य उज्यालो मान्न सकिँदैन । धरानदेखि रानीसम्मको कुल ४९ किमी सडकमा ७ वर्ष
प्रकाशित मितिः श्रावण ३०, २०७६
२९० पटक पढिएको
विकासप्रेमी नेतृत्वको खोजी
आगामी मङ्सीर १४ गते विभिन्न कारणले जनप्रतिनिधि अभाव रहेका स्थानीय तहहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने टुङ्गो भएपछि अहिले देशभर चुनावी चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । एक वर्षदेखि प्रमुख विहीन बनेको धरान उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले जोडतोडका साथ चुनाव लागेको छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी दौड शुरु भइसकेको छ । पहिलाको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले, माओवादी र काङ्गे्रस मुख्य पार्टीका रूपमा थिए तर आउँदो उपनिर्वाचनका लागि नेकपा र काङ्ग्रेसबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने अवस्था छ । त्यसैले पनि उपनिर्वाचनको रौनक झनै बढेको छ । दलका स्थानीय नेताहरूले उपनिर्वाचनको तयारी गरिरहँदा धरानका बुद्धिजीवी भने विकासप्
प्रकाशित मितिः श्रावण २९, २०७६
समाजमा बढ्दो ठगीको सामाजिक मनोविज्ञान
सामाजिक रोगको रूपमा ठगी धन्दा मुलुकै भरि फस्टाएको छ । ठगीका अनेक रूप छन् । जेमा पनि ठगी मात्र हुन थालेको छ । ठग आखिर ठग नै हो । समाजको धमिरा हो । ठगी गर्नेले अनेक रूप धारण गरेर सर्वसाधारणलाई मात्र नठगेर प्रहरी, सेना, व्यूरोक्राट्स, कलाकार, चिकित्सक, पत्रकार, वकिल, व्यापारी व्यवसायी, उद्योगीदेखि मन्त्री नेतासम्मलाई बाँकी राख्दैन । ठगी धन्दा गर्ने भनेर ट्याग नलागे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तिनै व्यापारीले उपभोक्तालाई मूल्यमा, तौलमा, मिसावट गरेर ठगी गरिरहेका छन् । मजदुरले मालिकलाई, मालिकले मजदुरलाई, निजी विद्यालयले अभिभावकलाई, यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई, सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई,वैदेशिक रोजगा
प्रकाशित मितिः श्रावण २८, २०७६
१८५ पटक पढिएको
घातक एन्थ्रेक्स नियन्त्रण गरौँ
सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीको सिमानामा पर्ने कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको चरनक्षेत्रमा प्राणघातक रोग एन्थ्रेक्सको जीवाणुका कारण पशु चौपायाहरू मरेको भन्ने ती चौपायाहरूको रगत परीक्षणबाट खुलेको छ । विशेषज्ञ टोलीले पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगरमा गरेको रगतको नमूना ल्याब परीक्षणबाट स्वाइल वर्न डिजिज ‘एन्थ्रेक्स’ को जीवाणुु फेला परेको पुष्टि भएको छ । यो पुष्टि भएसँगै स्थानीयमा त्राससमेत फैलिएको छ । एन्थ्रेक्सको जीवाणु माटोमा १० देखि २० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने र जनावर हुँदै यो मानिसमा समेत फैलिन सक्ने भएकाले यसको सङ्क्रमणबाट तत्काल पशु तथा मानिसको मृत्यु हुने भएकाले आम नागरिकमा त्रास
प्रकाशित मितिः श्रावण २७, २०७६
२१० पटक पढिएको
समस्या नबनून् सहकारी
नेपालमा छोटो समयमै सहकारी अभियानले फड्को मार्यो । गाउँ गाउँसम्म सहकारीको विस्तार भयो । अहिले सहरमा टोलै पिच्छे जसो सहकारी संस्थाहरू छन् । साना साना पूँजीलाई एकीकृृत गरेर उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकियोस् भनेर नै सरकारले पनि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लियो । तर, पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरू नियाल्ने हो भने सहकारीमा विकृतिहरू बढिरहेका छन् । केही सातादेखि धरानमा सल्लेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण विक बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर भागेको घटना चर्चामा छ । उनले सहकारीमा आफ्नै छोरालाई प्रबन्धक र सालीलाई लेखापाल बनाएका थिए । सहकारी नियम विपरीत प्रबन्धक र लेखापाल नियुक्त गर्दा समेत बचतकर्ता
प्रकाशित मितिः श्रावण २४, २०७६
१७० पटक पढिएको
ब्रिफकेस र भागबण्डा अन्त्य गरी उपकुलपति बनाऊ
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारले थिलथिलो छ । पछिल्लो पटक उपकुलपति राजकुमार रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घूससहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नुले भ्रष्टाचार कुन तहमा भइरहेको थियो भन्ने गतिलो उदाहरण बन्यो । सायद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकुलपति ओहदाको ‘ठूलो माछो’ पक्राउ गरेको पहिलो घटना हुनुपर्छ । यसले पनि प्रतिष्ठानको हैसियतमाथि गतिलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । लज्जाशरणम्को यो हद हुनुको पछाडिको कारणहरु खोजिनुपर्छ । केही वर्षअघिसम्म अर्थात् बलभद्रप्रसाद दास हुनुअघिसम्मका उपकुलपतिको भद्रताको गुणगान गाउनेको कमी छैन यहाँ । तर, बलभद्र दासपछि बीपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको
प्रकाशित मितिः श्रावण २३, २०७६
खानेपानीको समस्या चाँडो समाधान गर
धरानको खानेपानी समस्या नयाँ विषय होइन । वर्षौंंदेखि धरानबासीले सुख्खायाममा पानीका लागि छिमेकीसँग झगडा गर्नुपर्छ । खानेपानी संस्थानको कार्यालयमा नारा जुलुस लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ । पानीकै अभावमा धरानमा होटलदेखि अन्य उद्योग धन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि पानी अभाव झेल्दै आएको धरानमा एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा धरान खानेपानी आयोजना शुरु भएपछि धरानबासीले पानीको समस्या समाधान हुने आशा गरेका थिए । तर, अहिले आयोजनाले पानी वितरण गरेका क्षेत्रमा वर्षायाममै उपभोक्ताले पानी नपाएपछि धरानबासीको हैरानी बढेको छ । खानेपानी संस्थानले सुख्खा याममा आवश्यकता अनुसार पानी पु¥
प्रकाशित मितिः श्रावण २२, २०७६
२०० पटक पढिएको
बलात्कारीको हकमा प्र ...
आजकाे राशीफल, माघ १० ...
सन्तानै सशस्त्र प्रह ...